ဥရောပနိုငျငံမြားမှ ဇာတျကားကောငျး ရုပျရှငျ ၂၁ ကားကို ယခုလအတှငျး အခမဲ့ပွသသှားမညျ | Opinion Leaders
ဥရောပနိုငျငံမြားမှ ဇာတျကားကောငျး ရုပျရှငျ ၂၁ ကားကို ယခုလအတှငျး အခမဲ့ပွသသှားမညျ
ဥရောပတဝှမျးမှ ရုပျရှပျကားပေါငျး ၂၁ ကားကို မန်တလေးနဲ့ ရနျကုနျမှာ စကျတငျဘာလအတှငျး အခမဲ့ပွသှားမှာဖွဈပါတယျ။
အခုလို ဥရောပရုပျရှငျကားတှကေို အခမဲ့ပွသှားမှာဖွဈတဲ့ ၂၈ ကွိမျမွောကျ ဥရောပရုပျရှငျပှဲတျော ကငျြးပမယျ့အကွောငျးကို ဒီကနေ့ စကျတငျဘာလ ၁ဝ ရကျနေ့၊ ညနပေိုငျး၊ ရနျကုနျမွို့၊ ဗဟနျးမွို့နယျရှိ Goethe Villa မှာ ဥရောပသမဂ်ဂရဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ သံအမတျကွီးကိုယျတိုငျ တကျရောကျပွီး သတငျးစာရှငျးလငျးပှဲ ပွုလုပျခဲ့တာပါ။
ရုပျရှငျပှဲတျောကို မန်တလေးမွို့က မင်ျဂလာရုပျရှငျရုံ စငျထရယျပှိုငျ့မှာ စတငျပွသသှားမှာဖွဈပွီး ရုပျရှငျကား ၉ ကားကို လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၁၃ ရကျနကေ့နေ ၁၅ ရကျနအေ့ထိ ပွသမှာဖွဈပါတယျ။ရနျကုနျမှာတော့ ခံစားမှုတှကှေဲပွားမယျ့ ဥရောပရုပျရှငျကား ၂ဝ ကို လာမယျ့ စကျတငျဘာလ ၂ဝ ရကျနကေ့နေ ၂၉ ရကျနအေ့ထိ ပွသသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။
အျောစကာဆုရ ပိုလနျဒါရိုကျတာ Pawet Pawlikowski ရိုကျကူးထားတဲ့ "Cold War" ရုပျရှငျနဲ့ စကျတငျဘာလ ၂ဝ ရကျနမှေ့ာ စတငျဖှငျ့လှဈပွသမှာဖွဈပွီး ရနျကုနျမွို့လယျရှိ နပွေညျတျော ရုပျရှငျရုံနဲ့ ကမ်ဘာအေးဘုရားလမျးပျေါမှာရှိတဲ့ Goethe Villa မှာ အခမဲ့ပွသသှားမှာဖွဈပါတယျ။
"ရုပျရှငျပှဲတျောကို ရနျကုနျမှာ နှဈစဉျကငျြးပနိုငျတဲ့အတှကျရော ပထမဦးဆုံးအကွိမျ ရုံးပိတျရကျအစီအစဉျအဖွဈ မန်တလေးမွို့မှာ ပွသနိုငျတော့မှာ ဖွဈတဲ့အတှကျပါ ကြှနျတျောတို့အနနေဲ့ ပြျောရှငျကနြေပျမိပါတယျ။မွနျမာဘုရငျတှေ နနျးစံခဲ့တဲ့ မန်တလေးမွို့နဲ့ လိုကျလြောညီထှဖွေဈစမေယျ့ ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈတဲ့" King of the Belgians" နဲ့ စတငျပွသသှားမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံသားတှကေို ဥရောပနိုငျငံအခငျြးခငျြး ကူးလူးဆကျနှယျနတေဲ့ ခံယူခကျြတှေ၊ အကွောငျးအရာတှနေဲ့ အနုပညာတှကေို ကွီးမားတဲ့ ဖနျသားပွငျပျေါကနတေဆငျ့ ဥရောပက လူတှရေဲ့ လူနမှေုဘဝတှကေို ကွညျ့ရှုခံစားဖို့ ဖိတျချေါလိုပါတယျ။ဥရောပရုပျရှငျတှအေနနေဲ့ အကွောငျးအရာမြိုးစုံ စုံလငျစှာရှိပွီး နောကျခံယဉျကြေးမှုတှကေ ဆကျနှယျမှုရှိနတော တှရေ့မှာပါ" လို့ ဥရောပသမဂ်ဂရဲ့ မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ သံအမတျကွီးဖွဈသူ H.E. Kristian Schmidt က ပွောပါတယျ။
ပွသသှားမယျ့ ရုပျရှငျဇာတျကားတှကေ ဟာသ၊ ဒရမျမာ၊ မှတျတမျးရုပျရှငျ အပါအဝငျ ကလေးငယျတှအေတှကျ ရညျရှယျရိုကျကူးထားတဲ့ ရုပျရှငျတှလေညျး အမြိုးအစားစုံစုံလငျလငျ ပါဝငျတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရုပျရှငျလကျမှတျတှကေိုတော့ ပှဲမစမီ ၁ နာရီမှ ၁၅ မိနဈအလိုထိ ဦးရာလူစနဈနဲ့ အခမဲ့ရယူနိုငျမှာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
အခုကငျြးပသှားမယျ့ ၂၈ ကွိမျမွောကျ ဥရောပရုပျရှငျပှဲတျောကို မွနျမာနဲ့ ဥရောပနိုငျငံတို့အကွား ယဉျကြေးမှုခွငျး ဖလှယျရနျနဲ့ ဥရောပရုပျရှငျမြားရဲ့ မတူကှဲပွားမှုတှကေို ခံစားသိရှိနိုငျစရေနျ ရညျရှယျပွီး မွနျမာနိုငျငံဆိုငျရာ ဥရောပသမဂ်ဂ ကိုယျစားလှယျအဖှဲ့မှ ဦးဆောငျကာ Goethe Institut Myanmar၊ ပွငျသဈယဉျကြေးမှုဌာနတို့နဲ့ ပူးပေါငျးကငျြးပတာ ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ရနျကုနျ၊ စကျတငျဘာ - ၁ဝ
ဥရောပတဝှမ်းမှ ရုပ်ရှပ်ကားပေါင်း ၂၁ ကားကို မန္တလေးနဲ့ ရန်ကုန်မှာ စက်တင်ဘာလအတွင်း အခမဲ့ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
အခုလို ဥရောပရုပ်ရှင်ကားတွေကို အခမဲ့ပြသွားမှာဖြစ်တဲ့ ၂၈ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော် ကျင်းပမယ့်အကြောင်းကို ဒီကနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁ဝ ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်း၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဗဟန်းမြို့နယ်ရှိ Goethe Villa မှာ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးကိုယ်တိုင် တက်ရောက်ပြီး သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ ပြုလုပ်ခဲ့တာပါ။
ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို မန္တလေးမြို့က မင်္ဂလာရုပ်ရှင်ရုံ စင်ထရယ်ပွိုင့်မှာ စတင်ပြသသွားမှာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ကား ၉ ကားကို လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၁၃ ရက်နေ့ကနေ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မှာတော့ ခံစားမှုတွေကွဲပြားမယ့် ဥရောပရုပ်ရှင်ကား ၂ဝ ကို လာမယ့် စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့ကနေ ၂၉ ရက်နေ့အထိ ပြသသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အော်စကာဆုရ ပိုလန်ဒါရိုက်တာ Pawet Pawlikowski ရိုက်ကူးထားတဲ့ "Cold War" ရုပ်ရှင်နဲ့ စက်တင်ဘာလ ၂ဝ ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွင့်လှစ်ပြသမှာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့လယ်ရှိ နေပြည်တော် ရုပ်ရှင်ရုံနဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ Goethe Villa မှာ အခမဲ့ပြသသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
"ရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို ရန်ကုန်မှာ နှစ်စဉ်ကျင်းပနိုင်တဲ့အတွက်ရော ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရုံးပိတ်ရက်အစီအစဉ်အဖြစ် မန္တလေးမြို့မှာ ပြသနိုင်တော့မှာ ဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ ပျော်ရွှင်ကျေနပ်မိပါတယ်။မြန်မာဘုရင်တွေ နန်းစံခဲ့တဲ့ မန္တလေးမြို့နဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမယ့် ဇာတ်ကားကောင်းတစ်ကားဖြစ်တဲ့" King of the Belgians" နဲ့ စတင်ပြသသွားမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကို ဥရောပနိုင်ငံအချင်းချင်း ကူးလူးဆက်နွယ်နေတဲ့ ခံယူချက်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေနဲ့ အနုပညာတွေကို ကြီးမားတဲ့ ဖန်သားပြင်ပေါ်ကနေတဆင့် ဥရောပက လူတွေရဲ့ လူနေမှုဘဝတွေကို ကြည့်ရှုခံစားဖို့ ဖိတ်ခေါ်လိုပါတယ်။ဥရောပရုပ်ရှင်တွေအနေနဲ့ အကြောင်းအရာမျိုးစုံ စုံလင်စွာရှိပြီး နောက်ခံယဉ်ကျေးမှုတွေက ဆက်နွယ်မှုရှိနေတာ တွေ့ရမှာပါ" လို့ ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ သံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E. Kristian Schmidt က ပြောပါတယ်။
ပြသသွားမယ့် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေက ဟာသ၊ ဒရမ်မာ၊ မှတ်တမ်းရုပ်ရှင် အပါအဝင် ကလေးငယ်တွေအတွက် ရည်ရွယ်ရိုက်ကူးထားတဲ့ ရုပ်ရှင်တွေလည်း အမျိုးအစားစုံစုံလင်လင် ပါဝင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရုပ်ရှင်လက်မှတ်တွေကိုတော့ ပွဲမစမီ ၁ နာရီမှ ၁၅ မိနစ်အလိုထိ ဦးရာလူစနစ်နဲ့ အခမဲ့ရယူနိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အခုကျင်းပသွားမယ့် ၂၈ ကြိမ်မြောက် ဥရောပရုပ်ရှင်ပွဲတော်ကို မြန်မာနဲ့ ဥရောပနိုင်ငံတို့အကြား ယဉ်ကျေးမှုခြင်း ဖလှယ်ရန်နဲ့ ဥရောပရုပ်ရှင်များရဲ့ မတူကွဲပြားမှုတွေကို ခံစားသိရှိနိုင်စေရန် ရည်ရွယ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဥရောပသမဂ္ဂ ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကာ Goethe Institut Myanmar၊ ပြင်သစ်ယဉ်ကျေးမှုဌာနတို့နဲ့ ပူးပေါင်းကျင်းပတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရန်ကုန်၊ စက်တင်ဘာ - ၁ဝ